Xarunta Dhaqanka ee Centilia - El Centro de la Raza
Xarunta Dhaqanka ee Centilia waxay ku taal 1660 S Roberto Maestas Festival ST, Seattle, WA 98144. Centilia waa eray caan ah oo ku jira afka Nahuatl (Uto-Aztecan) oo macnihiisu yahay “in la isku daro, la mid noqdo”.
Marti geli dhacdadaada xigta Centilia! Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad kiraysato goobta munaasabadaha dhaqammada kala -duwan ee dhacdadaada gaarka ah ee xigta. Xarunta Dhaqanka ee Centilia ee Latino ayaa ah meesha ugu habboon munaasabad kasta oo gaar loo leeyahay ama dadweyne, sida xafladda dhalashada, aqoon isweydaarsiga ganacsiga, xafladda lacag ururinta, xafladda qalin -jabinta, Quinceañera, aroos iyo wax kaloo badan!
Goobteenu waxay bixisaa 3,110 cagood oo laba jibbaaran oo boos ah, oo leh awood ay ku qabato 250 qof oo ah qaabka casharka iyo 200 oo qof oo ah qaabka xafladda. Ka sokow farshaxanka quruxda badan ee farshaxan-yahannada maxalliga ah, Centilia waxay kaloo si toos ah u siisaa saldhigga tareenka Beacon Hill Light, taasoo ka dhigaysa goob ku habboon oo si sahlan loo heli karo kiraystayaasha!
Markaa aan isu nimaadno oo kaa caawinno martigelinta:
Quinceañeras & Maalmaha Dhalashada / Shirarka & Kulamada / Aroosyada & Sannad -guurada / Qubaysyada Ilmaha & Baabtiisyada / Qalin -jabinta / Munaasabad kasta oo Khaas ah
Saacadaha iyo Qiimaha
Booskeena wuxuu diyaar yahay 7 subaxnimo - 12 subaxnimo, 7 maalmood usbuucii. Heerarka saacadlaha ah iyo maalin kasta ee la heli karo:
Isniin-Khamiis: $ 158/hr
Jimce-Axad: $ 220/hr
Isniinta-Khamiista: $ 1260 (qiime maalinle ah)
Toddobaadka dhammaadka: $ 1650 (qiime maalinle ah)
Meesha badh ka dhig 70% qiimaha qolka oo buuxa
Marxaladda dibadda/gelitaanka barxadda ayaa loo heli karaa kiro marka la codsado
waxyaabaha lagu raaxeysto
Miisaska (wareega iyo leydikaarka), kuraasta, marxaladda guuritaanka, baarka la qaadan karo, jikada heerkulka la kontoroolo, qaybiyaha qolka, albaabka garaashka oo laga heli karo barxadda bannaanka, meel galaaska (dhammaadka toddobaadka), iyo qolalka goosashada ayaa laga heli karaa dhismaha taariikhiga ah ee El Centro de la Raza .
Ganacsiga Wi-Fi, 41 ku hadla saqafka, laba borojektar iyo shaashado, iyo makarafoon (wireless la heli karo).
Iibiyeyaasha cuntada ee Xarunta Fursadda Ganacsi ee Meheradda Ganacsiga ee Cuntada ayaa diyaar u ah inay haqabtiraan dhacdadaada xigta:
Anotjitos Lita Rosita - cuntada Oaxacan dhab ah
Qaniinyada Shark - ceviches cusub
Pizza ka baxsan - pizza, lasagna, salad, iyo in ka badan
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan kala xiriir Victor Cerdeneta at vcserrato@elcentrodelaraza.org ama (360) 986-7022.
Qalab cusub oo cusub, barxad qurux badan oo Latino dhiirigelinaysa iyo qiimayaal macquul ah! Waxay ku taallaa Plaza Roberto Maestas.
U soo gudbi codsigaaga boos celinta Xarunta Dhaqanka Centilia ama meel ku taal El Centro de la Raza oo taariikhi ah dhismaha halkan: Codso Meel. Waxaad sidoo kale kala xiriiri kartaa kooxdayada at facilities@elcentrodelaraza.org ama wac (206) 957-4603 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo si aad u samaysato boos celin.